Abaalmarinta Nooca Abaalmarinta waa abaalmarinta cusub ee Monotype | Abuurista khadka tooska ah
La qaab qoriddu way ka muhiimsan tahay maanta bogagga degitaanka, baloogyo iyo in ka badan, laakiin looma aqoonsana inay ku filan tahay dhammaan wixii ay runtii na siiso markaan u nimaadno degel websaydh ah. Daabacaadda koowaad waxaa badanaa lagu bixiyaa warqadda waana taas tan nagu dhiirrigelinaysa inaan bilowno akhrinta cutubka cutubka ka dib.
Arrintan awgeed Monotype waxay abuurtay abaalmarino u gaar ah taas oo shirkadahaas ku sharadday inay hagaajiyaan noocyadooda ama ay iyagu abuuraan kuwa iyagu aqoonsada astaanta lagu abaalmarin doono. Waan xusuusan karnaa maalmahan ka dambeeya midka hagaajiyay Twitch si aad uga dhigto mid kaamil ah.
Waxaan ka hadlaynaa Abaalmarinta Nooca Ciyaaraha taasna waxay u timaadaa in la aqoonsado astaamahaas xoogga saaraya xarfaha aan hadhow ku arki doonno goobo aan la tirin karin ama xitaa ololahooda xayeysiinta.
Monotype waxay isu diyaarineysaa inay soo bandhigto barnaamij abaalmarin oo cusub si loo aqoonsado waxa ugu fiican naqshadeynta qoraalka iyo aqoonsiga sumadda. Idinkuna ma waxaad doonaysaan inaad seegto faahfaahinta arrintan! # sawir # qoris pic.twitter.com/QTktWn1btX
- Nooca (@Nooska) September 12, 2019
Taasi waa, in Monotype uu mas'uul ka yahay abuuritaanka bulshadaas hal-abuurka ah taasi waxay naga caawin doontaa inaan aqoonsano magacyada iyo wakaaladaha khubarada u ah hagaajinta noocyadooda.
Runtuna waxay tahay inay jiraan noocyo deji isbeddellada, marka laga reebo ku xirnaanshaha nooc gaar ah. Waxay arkaysaa ishaas, waxaanan horeyba u naqaannay cidda aan ku xirayo. Tani waa halka ay ka yimaadaan shaqada farshaxan yahannadan naqshadeynta kuwaas oo isku dayaya inay meeriskaas ku dhejiyaan xarfaha sidaa darteed aynu si dhakhso leh u aqoonsanno Duolingo oo leh nooc cusub.
Monotype waxay u oggolaaneysaa naqshadeeye kasta, oo muujinaya shaqadiisa oo leh summad, si geli magacaabista gudaheeda oo aad ku guuleysato mid ka mid ah abaalmarinnada. In kasta oo runtii aysan ahayn inaad muujiso xiriirkaas si aad uga qaybgasho abaalmarinnada noocaas ah.
Waxaan leenahay xitaa bogga internetka ee aan ku dhowaan karno si loo ogaado abaalmarinta iyo taariikhda la qaban doono. Halkan waxaad ku haysaa shabakada. In ka badan soo jeedin xiiso leh oo muhiim ah si loo iftiimiyo naqshadeeyayaasha iyo astaamaha ugu wanaagsan ee calaamadda calaamadaha ku dul saaray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Monotype waxay bilaabeysaa abaalmarinteeda si ay u dhasho noocyo u heellan qoraalka
Adobe wuxuu muujinayaa sixirka aaladda "Content-Aware Fill"